1 Ndị Eze 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Eze nke Mbụ 1:1-53
Devid na Abishag (1-4)
Adọnaịja nwara iweghara ọchịchị (5-10)
Netan na Bat-shiba kụghasịrị atụmatụ Adọnaịja (11-27)
Devid kwuru ka e tee Solomọn mmanụ (28-40)
Adọnaịja gbagara n’ebe ịchụàjà (41-53)
1 Eze Devid emeela agadi,+ kaakwa ezigbo nká. N’agbanyeghị na a na-ekpuchi ya ákwà, ahụ́ anaghị ekporo ya ọkụ. 2 N’ihi ya, ndị na-ejere ya ozi sịrị ya: “Ka a chọtara onyenwe anyị bụ́ eze otu nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, ka ọ na-ejere eze ozi, na-elekọtakwa ya. Ọ ga na-edina n’akụkụ gị, ka ahụ́ na-ekpo onyenwe anyị bụ́ eze ọkụ.” 3 Ha wee chọwa nwa agbọghọ mara mma n’ala Izrel niile, mechaakwa hụ Abishag+ nwaanyị Shunem+ ma kpọtara ya eze. 4 Abishag mara ezigbo mma. Ọ malitekwara ilekọta eze, na-ejekwara ya ozi. Ma, ya na eze enweghị mmekọahụ ọ bụla. 5 Ka ihe a na-eme, Adọnaịja+ nwa Hagit nọ na-ebuli onwe ya elu, na-asị: “Ọ bụ m ga-abụ eze.” O nwetara otu ụgbọ ịnyịnya na ndị na-agba ịnyịnya, nwetakwa ndị nche iri ise.*+ 6 O nwebeghịkwa mgbe nna ya baara ya mba,* ma ọ bụkwanụ jụọ ya, sị: “Gịnị mere i ji mee ihe a?” Adọnaịja makwara ezigbo mma. Nne ya mụrụ ya mgbe a mụchara Absalọm. 7 Adọnaịja na-agakwurukwa Joab nwa Zeruya na Abayata+ onye nchụàjà, ha ana-enyere ya aka, na-akwadokwa ya.+ 8 Ma, Zedọk+ onye nchụàjà, Benaya+ nwa Jehoyada, Netan+ onye amụma, Shimiaị,+ Riaị, nakwa ndị dike bụ́ ndị agha Devid+ anaghị akwado ya. 9 Ka oge na-aga, Adọnaịja gara n’akụkụ nkume dị na Zohelet, nke dị nso n’En-rogel, chụọ atụrụ na ehi nakwa anụ ndị ọzọ gbara agba n’àjà.+ Ọ kpọkwara ụmụnne ya ndị nwoke niile bụ́ ụmụ eze nakwa ụmụ nwoke Juda niile na-ejere eze ozi. 10 Ma, ọ kpọghị Netan onye amụma, Benaya na ndị bụ́ dike n’agha, nakwa Solomọn nwanne ya. 11 Netan+ gaziri gwa Bat-shiba,+ nne Solomọn,+ sị: “Ọ̀ bụ na ị nụbeghị na Adọnaịja+ nwa Hagit aghọọla eze? Devid onyenwe anyị amaghịkwa gbasara ya. 12 N’ihi ya, biko, bịa ka m gwa gị ihe ị ga-eme ka ị zọọ ndụ* gị na nke Solomọn nwa gị.+ 13 Gakwuru Eze Devid, sịkwa ya, ‘Ọ́ bụghị gịnwa, bụ́ onyenwe m eze, ṅụụrụ ohu gị nwaanyị iyi, sị: “Ọ bụ nwa gị Solomọn ga-abụ eze ma m nwụọ, ọ bụkwa ya ga-anọ n’ocheeze m”?+ Oleekwanụ ihe mere Adọnaịja jizi ghọọ eze?’ 14 Mgbe ị ka nọ ebe ahụ na-agwa eze okwu, m ga-abata kwado ihe ị na-ekwu.” 15 Bat-shiba wee gakwuru eze n’ọnụ ụlọ ya dị n’ime. Eze akaakwala ezigbo nká. Abishag+ bụ́ nwaanyị Shunem nọkwa na-ejere ya ozi. 16 Bat-shiba hulatara kpọọrọ eze isiala. Eze asị ya: “Gịnị ka ị chọrọ ịrịọ?” 17 Ya asị ya: “Onyenwe m, ọ bụ gị ji aha Jehova bụ́ Chineke gị ṅụọrọ ohu gị nwaanyị iyi, sị, ‘Ọ bụ nwa gị Solomọn ga-abụ eze ma m nwụọ, ọ bụkwa ya ga-anọ n’ocheeze m.’+ 18 Ma, Adọnaịja aghọọla eze. Onyenwe m bụ́ eze amaghịkwa ihe ọ bụla gbasara ya.+ 19 Ọ chụọla ọtụtụ ehi na anụ ndị ọzọ gbara agba nakwa atụrụ n’àjà, kpọọkwa ụmụ eze ndị nwoke niile, Abayata onye nchụàjà, na Joab onyeisi ndị agha.+ Ma, ọ kpọghị ohu gị bụ́ Solomọn.+ 20 Ugbu a, onyenwe m eze, ndị Izrel niile na-ele gị anya ka ị gwa ha onye ga-anọchi n’ocheeze onyenwe m bụ́ eze ma ọ nwụọ. 21 Ọ bụrụ na ị gwaghị ha ya, ozugbo onyenwe m eze nwụrụ otú nna nna ya hà nwụrụ, a ga na-elezi mụ na Solomọn nwa m anya ka ndị na-agba ọchịchị mgba okpuru.” 22 Mgbe ọ ka na-agwa eze okwu, Netan onye amụma bịara.+ 23 A gwara eze ozugbo, sị: “Netan onye amụma abịala.” Netan bataziri ebe eze nọ, hulata ala kpọọrọ ya isiala. 24 Netan jụziri eze, sị: “Onyenwe m eze, ò nwere mgbe i kwuru, sị, ‘Ọ bụ Adọnaịja ga-abụ eze ma m nwụọ, ọ bụkwa ya ga-anọ n’ocheeze m’?+ 25 Ihe mere m ji ajụ bụ na ọ gara taa chụọ ọtụtụ ehi na anụ ndị ọzọ gbara agba nakwa atụrụ n’àjà.+ Ọ kpọọkwala ụmụ eze ndị nwoke niile, ndị isi ndị agha, na Abayata onye nchụàjà.+ Ha na ya nọkwa ebe ahụ na-eri, na-aṅụ, ha ana-asịkwa, ‘Eze Adọnaịja, ị ga-adị ogologo ndụ!’ 26 Ma, ọ kpọghị mụnwa bụ́ ohu gị. Ọ kpọghịkwa Zedọk onye nchụàjà, na Benaya+ nwa Jehoyada, nakwa ohu gị Solomọn. 27 Onyenwe m eze ọ̀ kwadoro ihe a ha na-eme n’ebughị ụzọ mee ka mụnwa bụ́ ohu ya mara onye ga-anọchi n’ocheeze onyenwe m bụ́ eze ma ọ nwụọ?” 28 Eze Devid wee sị: “Kpọọrọnụ m Bat-shiba.” Mgbe ha kpọrọ ya, ọ batara ma guzoro n’ihu eze. 29 Eze aṅụọ iyi, sị: “Eji m Jehova, bụ́ Chineke dị ndụ, onye napụtara m* n’ahụhụ niile m tara,+ na-aṅụ iyi 30 na ọ bụ ihe ahụ m ji Jehova bụ́ Chineke Izrel ṅụọrọ gị iyi ka m ga-eme taa. M ṅụụrụ gị iyi, sị, ‘Ọ bụ Solomọn nwa gị ga-abụ eze ma m nwụọ, ọ bụkwa ya ga-anọ n’ocheeze m.’” 31 Bat-shiba wee hulata kpọọrọ eze isiala, sị: “Ka onyenwe m bụ́ Eze Devid dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.” 32 Eze Devid sịrị ozugbo ahụ: “Kpọọrọnụ m Zedọk onye nchụàjà, Netan onye amụma, na Benaya+ nwa Jehoyada.”+ Mgbe a kpọrọ ha, ha abịa ebe eze nọ. 33 Eze asị ha: “Kpọrọnụ ndị na-ejere m ozi gaa mee ka Solomọn nwa m nọdụ n’elu jakị m,*+ durukwanụ ya gaa Gaịhọn.+ 34 Zedọk onye nchụàjà na Netan onye amụma ga-etekwa ya mmanụ+ ebe ahụ ka ọ bụrụ eze Izrel. Fụọkwanụ opi ma sị, ‘Eze Solomọn ga-adị ogologo ndụ.’+ 35 Sorokwanụ ya lọghachi ebe a ka ọ bịa nọrọ n’ocheeze m. Ọ bụ ya ga-abụ eze ga-anọchi m. Ọ bụkwa ya ka m ga-ahọpụta ka ọ bụrụ onye ndú Izrel na Juda.” 36 Benaya nwa Jehoyada sịrị eze ozugbo ahụ: “Amen! Ka Jehova bụ́ Chineke nke onyenwe m eze kwado ihe a. 37 Ka Jehova nọnyere Solomọn otú ahụ ọ nọnyeere onyenwe m eze.+ Ka o meekwa ka ọchịchị ya sie ike karịa nke onyenwe m bụ́ Eze Devid.”+ 38 Zedọk onye nchụàjà, Netan onye amụma, Benaya+ nwa Jehoyada, nakwa ndị Keretaịt na ndị Peletaịt+ gaziri mee ka Solomọn nọdụ n’elu jakị Eze Devid,+ dugakwa ya Gaịhọn.+ 39 Zedọk onye nchụàjà gakwara n’ụlọikwuu+ wepụta mpi mmanụ+ ma tee Solomọn mmanụ.+ Ha malitekwara ịfụ opi, mmadụ niile ana-eti mkpu, sị: “Eze Solomọn ga-adị ogologo ndụ!” 40 Ha niile mechakwara soro ya laghachi, na-afụ ọjà, na-aṅụrịkwa ezigbo ọṅụ, nke na ala gbabiri abụọ n’ihi mkpọtụ ha na-eme.+ 41 Adọnaịja na ndị niile ọ kpọrọ òkù nụkwara mkpọtụ ahụ mgbe ha richara nri.+ Mgbe Joab nụrụ ụda opi ahụ, ọ sịrị: “Gịnị mere ụdị mkpọtụ a ji na-eme n’obodo?” 42 Mgbe ọ ka kpụ okwu n’ọnụ, Jonatan+ nwa Abayata onye nchụàjà bịara. Adọnaịja asị ya: “Batawa, ị bụ ezigbo mmadụ. Ama m na i ji ozi ọma bịa.” 43 Ma Jonatan sịrị Adọnaịja: “Ọ bụghị ozi ọma. Onyenwe anyị bụ́ Eze Devid emeela Solomọn eze. 44 Eze gwara Zedọk onye nchụàjà, Netan onye amụma, Benaya nwa Jehoyada, nakwa ndị Keretaịt na ndị Peletaịt, ka ha mee ka Solomọn nọdụ n’elu jakị eze.+ 45 Zedọk onye nchụàjà na Netan onye amụma tekwara ya mmanụ na Gaịhọn ka ọ bụrụ eze. Mgbe e techara ya mmanụ, ha si ebe ahụ na-alọta, na-aṅụrị ọṅụ, na-emekwa ezigbo ụzụ n’obodo. Ọ bụ ya bụ mkpọtụ ahụ unu nụrụ. 46 Solomọn anọrọkwala ọdụ n’ocheeze. 47 Ihe ọzọ bụ na ndị na-ejere eze ozi gara kelee onyenwe anyị bụ́ Eze Devid, sị: ‘Ka Chineke gị mee ka aha Solomọn na-ede ude karịa nke gị. Ka o meekwa ka ọchịchị ya sie ike karịa nke gị.’ Eze wee nọrọ n’àkwà* ya kpọọrọ Chineke isiala. 48 Eze kwukwara, sị, ‘Ka e too Jehova bụ́ Chineke Izrel, onye mere taa ka e nwee onye nọchiri n’ocheeze m, meekwa ka m nọrọ ndụ hụ ya.’” 49 Ụjọ jidere ndị niile ahụ Adọnaịja kpọrọ òkù, onye nke ọ bụla n’ime ha ebilie lawa. 50 Ụjọ Solomọn jidekwara Adọnaịja, ya ebilie gaa jide aka na mpi ebe ịchụàjà.+ 51 A gara kọọrọ Solomọn, sị: “Ụjọ gịnwa bụ́ Eze Solomọn ejidela Adọnaịja. Ọ gaakwala jide aka na mpi ebe ịchụàjà, sị: ‘Ka Eze Solomọn buru ụzọ ṅụọrọ m iyi na ọ gaghị eji mma agha gbuo ohu ya.’” 52 Mgbe Solomọn nụrụ ya, ọ sịrị: “Ọ bụrụ na o mee ihe dị mma, otu ntutu isi ya agaghị ada n’ala. Ma ọ bụrụ na o mee ihe ọjọọ,+ ọ ga-anwụ.” 53 Eze Solomọn zikwara ndị mmadụ, ha agaa si n’ebe ịchụàjà kpọpụta ya. Mgbe ọ batara ebe Eze Solomọn nọ, ọ kpọọrọ Solomọn isiala. Solomọn asị ya: “Lawa n’ụlọ gị.”
^ Na Hibru, “ụmụ nwoke iri ise ga na-agba ọsọ n’ihu ya.”
^ Ma ọ bụ “kwuru ihe ga-ewute ya.”
^ Ma ọ bụ “nne jakị m.”
1 Ndị Eze 1